ARCHIVE, POLITICS » प्रधानमन्त्रीसंग राजपा नेताको 'फेस टु फेस' : कार्यकर्तामाथिको आक्रमण रोक्ने की नरोक्ने ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टीका शीर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको वार्ताका क्रममा सीधासाधा प्रश्न गरेका छन् । राजपा नेताहरुले मुलुकका विभिन्न स्थानमा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तामाथि आक्रमण तथा धरपकड भइरहेको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्ने कि नरोक्ने ? भन्दै कडा रुपमा प्रस्तुत भए।